Kava Kucatshulwe kwisiCwangciso - J & S Botanics
[Inkangeleko] powder Yellow
[Ubukhulu Particle] 80Mesh
[Ubunzima Net] 25kgs / igubu
Kava, okwabizwa ngokuba phupho methysticum, kava kava, kwaye 'Awa, yinzalelwane ityholwana encinane kwiziqithi kuMzantsi wePasifiki. Nengcambu zinti zenziwe kwi non-ezinxilisayo, isiselo psychoactive eye isetyenziswe ngokwentlalo ngomcimbi kangangamakhulu eminyaka e Hawaii, eFiji, kunye Tonga.
Kava ngokwemveli elungiswe ngokubeka iingcambu emhlabeni kwaye siyenza ibe engxoweni misindo, submerging emanzini, yaye ukucudisa incindi ebanzi, oqingqiweyo, isitya ngamaplanga. Coconut cups nesiqingatha iqokobhe ukuba nkxu, hluthani - punch style isitya. Emva ukusela indebe okanye ezimbini imvakalelo ingqalelo esiba kudityaniswe nokuphumla uqalisa ukuza kuyo. Nangona kumnandi, nto ayifani utywala ukuba iingcinga ihlala icace. Le ukunambitheka becala elimnandi, kodwa abanye bafumanisa ukuba kuthatha siqhelane nazo; ngokwenene kuxhomekeke ukukhethayo zokutya banjalo.
[Kava Kukhuselekile ukusebenzisa]
Iinzuzo ekhuselekileyo nesebenzayo ye kava ukuze bawubuyise iimpawu ixhala kwakhona inkxaso ngendlela meta-analysis, uphononongo ngendlela manani ngezilingo ezisixhenxe lwezonyango ebantwini yapapashwa ngo-2000 kwi-Journal of Clinical Psychopharmacology, kwaye kwakhona ngokutsha efanayo kakhulu ngo-2001. i-ncomo akazange afumane iziphumo eliyingozi ezinxulumene isibindi letyhefu.
Elokuqukumbela, eli isibindi lichatshazelwe izinto ezininzi, kuqukwa amayeza kunye namachiza non kagqirha, kwakunye utywala, nto leyo ebangela enkulu nomonakalo wesibindi. Kufuneka bazi ukuba amakhambi amayeza ezinamandla, ukuba ziphathwe ngentlonipho efanelekileyo malunga nonxibelelwano ezinokwenzeka kunye zinetyhefu, kuquka esibindini. Kwelinye icala, eludinini Kava kava ngayo ukhuseleko kude obudlula nto alingana amayeza.
Kava ti nga ku pfuna lulungisa eziliqela iingxaki, neziqapheleka ntshikilelo, ixhala, yaye aphazamisa iipateni zokulala. Noko ke, anxiolytic kava likaThixo (anti-ukuphakuzela okanye anti-ixhala arhente) kunye neempawu uzole nga lisisiqalo nezinye izifo ezininzi uxinezeleko nexhala ezinxulumene.
1. Kava njenge Therapy for Ukuxhalaba
2. Kava Ngamana Elisebenzayo ngxaki Mood Uthatha
4. Ukulwa Aging ngaphambi kwexesha
5. Yokuyeka Ukutshaya Aid
6. iintlungu Mortal njengento iintlungu
Okulandelayo: marigold luthathe
Sohlobo Aurantium Extract
yeembotyi zesoya luthathe
Ginkgo Biloba Caphula